Mareykanka oo faah faahiyey duqeyn uu ka fuliyey Jubbada Dhexe – Radio Baidoa
Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa sheegay in laba duqeyn oo ay Khamiistii la soo dhaafay la beegsadeen dhismo ay Al-Shabab ku leeyihiin meel ku dhow deegaanka Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ay ku dhaawaceen laba ka mid ah Ururka Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnaa.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in qiimeynta weerarkaasi ee uu Mareykanku ilaa iyo hadda sameeyay ay muujineyso in saldhigaasi ay Al-Shabaab lahaayeen la burburiyay, laba ka mid ah Xubnihii halkaas ku sugnaana ay dhaawacmeen.
Mareykanka ayaa duqeymo cirka ah si joogta ah uga fuliya Soomaaliya iyagoo la Al-Shabaab ee inta badan ku sugan gobolada jubbooyinka, shabeelooyinka iyo meelo ka mid ah gobolada dhexe, Baay iyo Bakool.
Waxaa kaloo ay duqeymo la beegsadaan Kooxda Daacish ee ku suganb buuraleyda Gobolka Bari ee Dowlad Goboleedka Puntland.
Arday farriin culus u dirtay madaxweyne Deni iyo wasiirkiisa waxbarashada